I-Freshcaller: Uhlelo lwefoni olubonakalayo lwamaqembu wokuthengisa akude | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 1, 2020 Lwesibili, Disemba 1, 2020 Douglas Karr
Ngenkathi amaqembu okuthengisa akude ekhule ngokuthandwa yizinkampani, ubhadane kanye nokukhiya kususe iqembu lesimanje lokuthengisa ukuthi lisebenze ekhaya. Ngenkathi ukuphela kokuvalwa kungashintsha abanye baye emaqenjini ukuze babuyele ehhovisi, anginasiqiniseko sokuthi iningi lezinkampani lizodinga lokho kuthutha. Izindleko ezingadingekile zehhovisi lokuthengisa elisenkabeni yedolobha ngeke nje zibe nembuyiselo yotshalo-mali ebikade iyenza… ikakhulukazi manje njengoba izinkampani zikhululekile ngabasebenzi abasebenza ekhaya.
Ngenkathi esinye isici esasikhuphuka ngokukhula kwakuyinkomfa yevidiyo, esinye isidingo samathimba okuthengisa akude kube yizinhlelo zokuphatha izingcingo. Amaqembu okuthengisa akude adinga izici ezimbalwa zokushaya lapho esebenza ekhaya:
Shayela uMaski - Ikhono lokwenza izingcingo eziphumayo nge-ID yocingo emele inkampani, hhayi inombolo eyimfihlo yomele umthengisi.
Ukuqapha Ucingo - Ikhono labaqeqeshi bokuthengisa lokulalela izingcingo eziphumayo nokunikeza ukuholwa kwabamele abathengisi babo ukuze bathuthukise imihlangano yabo yokuthengisa.
Shayela Ukubika - Amandla obuholi bokuthengisa ukulandelela ivolumu yezingcingo eziphumayo ukuqinisekisa ukuthi abamele abathengisayo bayakhiqiza.
I-Freshcaller: Uhlelo lwefoni lwamaqembu wokuthengisa
I-Freshcaller uhlelo lwefoni olubonakalayo olwakhelwe amaqembu okuthengisa. Ayinazo zonke izici ezibalulekile ngenhla, kodwa futhi uhlelo oluqinile lwefoni olulungele amaqembu okuthengisa akude ezithatha ukungena futhi zenze izingcingo zokuthengisa eziphumayo. Futhi i-Freshcaller ingasebenza kumakhalekhukhwini wabathengisi bakho.
I-Freshcaller inezici ezingeziwe ezizoshayela ukusebenza kahle ngokwengeziwe kwamaqembu akho okuthengisa:
Ukutholwa Kwenombolo Nokutholwa - Faka inombolo yakho yamanje ku-Freshcaller noma engeza izinombolo zasekhaya, ezamazwe omhlaba, ezingenayo, noma eziyize ebhizinisini lakho.
Shayela uMaski - Nikeza izingcingo zakho ukuthinta komuntu ngokufihla inombolo yebhizinisi lakho ngenombolo yakho yomuntu siqu.
Izinombolo Eziningi - Nikeza abakwa-reps bakho ngezinombolo ezweni ngalinye ababhekise kulo ukuze bathembeke kumakholi abo.
Ukwehliswa kwevoyisimeyili - Faka umyalezo orekhodwe ngaphambilini ngokuchofoza inkinobho ebhokisini lemiyalezo engenayo ye-voicemail yethemba elingakwazanga ukuya ocingweni.
Ukuqapha nokugoba - Lalela ingxoxo eqhubekayo bese ujoyina ucingo ukuze unikeze usizo ezandleni zempendulo elwela ukuvala isivumelwano.
Shayela Ukumaka - Dinga abamele abathengisi bakho ukumaka zonke izingcingo ezinesimo salolo kholi ukuze ukwazi ukuqapha ukusebenza kwekholi kanye nesigaba sokulindela.
Uhlelo lokusebenza lweselula - Nikeza abakwa-reps bakho amandla okuthengisa kusuka kunoma iyiphi indawo umsebenzi wabo ubathatha, ngohlelo lokusebenza lwe-Freshcaller abangalwenza futhi bathathe izingcingo futhi bakhe imikhondo ohambeni.
Izenzo Zokuhlanganisa - Dala ukuhola noma faka ucingo kokuhola okukhona nge- Ukuhlanganiswa kwe-Freshcaller-Freshsales. Qinisekisa ukuthi yonke ikholi ingene ngaphakathi kwe-akhawunti yakho ye-CRM.
Amakholi Omzila ku-Voicemail - Yenza imikhonzo yakho yemeyili yezwi, yenza izingcingo zangemva kwamahora ku-voicemail, noma uguqule ama-voicemail.
Setha Ukuhlukaniswa Kwamahora Ebhizinisi - Sebenzisa isikhungo sakho sezingcingo ngokuya ngezikhathi ezithile nezinsuku ezihambisana nebhizinisi lakho. Ungahlala ulungisa njengoba ukala.
Izingcingo Zengxenye ezine-Multi-Level IVR - Setha uhlelo oluguquguqukayo lwe-PBX olunamakhono wokuhambisa kalula izingcingo kuma-ejenti akho noma amaqembu, kanye nekhono lokufaka izinketho zokuzenzela.
Khuphuka Ngemigqa Eyabiwe - Yabelana ngenombolo yocingo eyodwa kubasebenzisi abaningi, bese uphendula izingcingo ezingenayo ezivela kunoma iyiphi ifoni, noma kuphi.
Dala Amaholide Nemithetho Yokuhamba - Faka uhlu oluyingqayizivele lwamaholide azo zonke izinombolo zocingo ezithengwe ngaphakathi kwe-akhawunti yakho ye-Freshcaller ukuhlela izingcingo ezingenayo ezitholwe ngesikhathi samaholide akho. Dala futhi uphathe izinhlelo ezikhethekile zomzila wokuphatha izingcingo ezingenayo ngamaholide.
Setha imikhonzo yangokwezifiso - Sebenzisa leli thuba ukwenza ngokwezifiso ukubamba, ulayini, noma umculo wesikhathi sokulinda ukubonisa imikhiqizo emisha, izinsizakalo, noma izimemezelo.
Khulisa izimpendulo ngemigqa yokulinda - I-Freshcaller izokwazisa ngokuzenzakalela abafonayo isikhundla sabo kulayini ngenkathi belinde ithuba labo lokukhuluma nethimba lakho lokusekela.
Vimba Izingcingo Zogaxekile - Vimbela ngokuzenzakalela izingcingo zogaxekile futhi unqamule abafonayo abanjalo ezifundeni ezithile abazama ukuxhumana nebhizinisi lakho.
Phendula Izingcingo kumafoni we-SIP - Thola izingcingo zakho ezingenayo ngqo kumadivayisi wakho we-SIP ngenkathi usakwazi ukusebenzisa ideshibhodi ye-Freshcaller ukudluliselwa, amanothi, njll.
Dlulisa izingcingo ngama-Voicebots - Nika amandla ibhizinisi lakho ukunikeza amathemba akho isipiliyoni esijabulisayo ngezimpendulo ezisheshayo ezinkingeni zabo noma ngaphandle kwe-ejenti.
Shintsha Ukusabalalisa Kwakho Kwezingcingo - Jabulela amathemba akho ngezimpendulo ezisheshayo ngokuhambisa izingcingo kubamele abathengisi abafanele.
Ngenisa Ukuhola Kwakho - Uma unohlu lwemikhondo, ungalayisha konke ngasikhathi sinye esikhundleni sokwenza oxhumana naye ngamunye ngokwehlukana ngaleyo ndlela ugcine isikhathi sakho.
Ukuphathwa Komugqa Wocingo Osebenzayo - Setha imigqa yezingcingo ukuthola abafonayo ngendlela ehlelekile, usabalalise umthwalo wakho wezingcingo ngokulinganayo, bese udala imithetho yomugqa esekwe kulayini.
Automate Call yakho yomgudu - Dala imithetho yomzila wangokwezifiso ngokusekelwe kokufakwayo okuvela kuzinhlelo ezivela eceleni njenge-CRM yakho noma i-Helpdesk.
Ukudalulwa: Siyinhlangano ephethwe yi I-Freshcaller futhi basebenzisa izixhumanisi zabo.
Tags: ukubiza maskingi-freshcallerizingcingo zokuthengisa ezingenayoizingcingo zokuthengisa eziphumayopbxukuthengisa okukudeamakholi wokuthengisa akudeabasebenza kudeukuthengisa shayela uhlelo lokusebenza lweselulaithegi yokushaya ucingoizingcingo zokuthengisaisistimu yefoni ebonakalayoi-voicebot
Susa.bg: Susa Izizinda Zesithombe Kuma-Headshots, Abantu, Nezinto Ngokungenaphutha nge-AI